"Garsoorka Waa Ka Mamnuuc In Garsoore maxkamadeed Uu Shir Saxaafadeed Sameeyo...Jamaal Cali Xuseen
(Hadhwanaagnews) Tuesday, February 12, 2019 12:36:31
Hargaysa(HWN)Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen ayaa arin layaableh ku tilmaamay shirkii jaraa’id ee uu Gudoomiyaha Maxkamadda Gobolka Hargeysi ku soo bandhigay Dacwado uu sheegay in Wargeyska Foore ku Xukumay, Jamaal ayaa Dhaar ku maray inaanay dacwadahaasi mid koodna ka mid ahayn kiiskii lagu qaaday Foore ee uu dhagaysigiisa ka qayb galay, waxaanu sheegay in haddii aanu ka qayb galeen uu rumaysan lahaa wixii shubay Garsoore Dalmar.
Waar ileyn anagaa wax aragnay. Dacwaddii dhegaysiga
ee Foore hadaanan joogi lahayn waxa uu sheegayo garsoorahu waan rumeysan lahaa anigoo sharaf u haya. Waxaa uu listka dacwadaha uu tirinayo run baan u qaadan lahaa. Ilaahay baa Igu og in waxaas uu tirinayo oo dhami aanay ku jirin dacwaddii Foore lagu soo oogay Oo Hal shay ahayd. Kolkii imika aan waraysi tegay halkuu ka keenay waxan Oo dacwado ah oo aan ku jirin dhegaysigii aan ka qayb galay, waxa la ii sheegay, ka dib markii aan hadlay, intuu xeera ilaalinta intuu u tegay uu yidhi keena listkii dacwadihii hore ee Foore Oo kuligood qaarna sanado ka hor banaanka lagu dhameystay Oo SOLJA ay uga garnaqday gudiggii Abaaraha iyo Wargeyska Foore; kuwa kalena kolkay wax cadeyn ah keeni waayeen ay xeera ilaalinta sooba dhaafi waayeen. Listka uu tiriyey ee aan isaga hor iman maan filaneynin inuu bulshadda uga dhigo in lagu haystay Foore iyo in aniga wax i dhaafeen. Runtii dacwad dhegaysigii Si fiican buu u agaasimayey Garsoore maxkamadda iyo dacwad dhegaysiga laakiin inay xoogag kale xukunkii carqaladeeyen ayaa dhici karta Oo culeys la saaray. Laakiin hadaan talo siin lahaa laba qodob: